झापालीलाई गाँज्यो ‘महङ्गो रोग’ले | स्वास्थ्य | साझामन्च
झापालीलाई गाँज्यो ‘महङ्गो रोग’ले
गोपाल काफ्ले/अर्जुन कार्की, प्रकाशित मिति : २०७४ ,फाल्गुन , १४ 17:32:27
पाँच वर्षमा ३२७ जनालाई उपचार सिफारिस
झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा भन्ने गरेका छन् ‘म त फाउको जिन्दगी बाँचिरहेको छु ।’ दुबै मिर्गौला खराब भएर केही वर्षदेखि अस्वस्थ रहेका ओलीले आफन्तले दिएको मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका छन् । उनले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएको करिब एक दशक हुनलाग्यो ।
बेलैमा उपचार पाउँदा मिर्गौलाका बिरामी पनि स्वस्थ रहन सक्छन् । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीजस्तै झापाको मेचीनगर १५, ज्यामिरगढीका अरुणकुमार बुढाथोकी पनि यसको उदाहरण बनेका छन् ।
१० वर्षअघि दक्षिण भारतको कोएम्बा टोरी हस्पिटलमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका बुढाथोकीको खराब भएको भनिएको मिर्गौलाले समेत अहिले काम गर्न थालेको छ । एउटा थपिएको समेत गरेर उनको शरीरमा अहिले तीनवटा मिर्गौला छन् । उनी मिर्गौला रोगबाट मुक्त भएर सक्रिय सामाजिक गतिविधिमा फर्किएका छन् ।
बुढाथोकी भन्छन् ‘शरीरमा एउटा मिर्गौला थपेको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, अहिलेसम्म ठिकै छु । एउटा मिर्गौला काम नै नलाग्ने भएपछि एउटा मिर्गौला किनेर हालेको छु । यतिका वर्ष भयो काम चलिरहेको छ ।’
१५ लाख रुपैयाँभन्दा कम्तीले उपचारै नहुने ‘महङ्गो रोग’ भनेर चिनिने मिर्गौला रोगले सताइएका बिरामीहरुको संख्या झापामा दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको छ । जिल्लामा केही वर्ष अघिसम्म फाट्ट फुट्ट देख्न र सुन्न पाइने यो रोगले अब सम्पन्न र गरीब वर्ग नछुट्टाइकन सबैलाई थला पार्न थालिसकेको छ ।
मिर्गौला रोगी बढेका बढ्यै
जिल्लामा कति मिर्गौला रोगी छन् भन्ने बारेमा कुनै अध्ययन भएको छैन । तर केही वर्षयता मिर्गौला रोगीको संख्या निरन्तर बढिरहेको पाइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाबाट उपचार सहयोगको सिफारिस गरिएका तथ्याङ्क हेर्दा यसको पुष्टि हुन्छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका नासु तारा सुवेदीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मिर्गौला रोगको उपचार सहयोगका लागि ५२ जनालाई सिफारिस दिइएको थियोे । यसैगरी, २०७१/७२ मा ६५ जना, २०७२/७३ मा ७२ जनाले राज्यबाट उपचार सहयोगका लागि सिफारिस पाएका छन् । यस्तै, २०७३/०७४ को तथ्याङ्क उपलब्ध हुन नसके पनि २०७३ असारदेखि २०७४ फागुन १४ गतेसम्म ४९ जना महिला र ८९ जना पुरुषलाई सिफारिस दिइएको नासु सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
राज्यले बिरामीलाई कसरी हेर्छ ?
मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरीजस्ता रोग लागेका बिरामीको उपचारका लागि सरकारले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिसको आधारमा उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्म अनुदान सहयोग दिने गरेको छ । सोही अनुदान पाउनका लागि मिर्गौला खराब भएका बिरामीहरुले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिस लैजाने भएका कारण तथ्याङ्क तयार हुने गरेको पाइएको छ ।
मिर्गौला रोगीहरुको वास्तविक संख्या सिफारिस लैजानेभन्दा ज्यादा हुनसक्ने जनस्वास्थ्य कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख मधुसुदन कोइराला बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक हप्ता ३/४ जना मिर्गौला रोगीलाई उपचारका लागि सिफारिस गरिएको अवस्था छ ।
मिर्गौला खराब भएमा बिरामीले नियमित डायलासिस गर्ने वा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को व्यक्तिले मिर्गौला प्रदान गरेमा र नेपालमै प्रत्यारोपण गराउँदा ४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको कोइरालाको भनाई छ । उनकाअनुसार यस्तो अवस्थामा सरकारले दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने गरेको छ ।
डायलासिसका लागि सरकारले दुई वर्षबाट बढाएर प्रत्यारोपण नहुन्जेलसम्मलाई सम्बन्धित अस्पतालमा सहुलियत गरिदिएको कोइरालाको भनाई छ ।
झापाका सरकारी र नीजि गरी तीनवटा अस्पतालमा उक्त सुविधा उपलब्ध छ । मेची अञ्चल अस्पताल, ओमसाई पाथीभरा अस्पताल भद्रपुर र विर्तासिटी अस्पताल बिर्तामोडमा मिर्गौलाको डायलासिस गर्ने सुविधा छ । उक्त अस्पतालमा लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले अस्पताललाई भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिए ।
बिरामीको उपचारार्थ सहयोगी हात अग्रसर
झापाको भद्रपुरबाट प्रकाशन हुने वरुण सप्ताहिकका सम्पादक माया पकुवालले पनि यतिबेला मिर्गौला रोगसँग जुध्नु परिरहेको छ । उनका दुवै मिर्गौला खराब भएको चिकित्सकको भनाई छ । सोको उपचारमा लाग्ने १५ लाख रुपैयाँ जुटाउन झापाका पत्रकारजन्य संगठन तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरु सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । पकुवाललाई उनका जेठाजु सौरभ प्रधानले एउटा मिर्गौला दिने तयारी छ ।
झापाकै हल्दिबारी २ का ३२ वर्षीय राज शिवाकोटीको दुवै मिर्गौला एकैसाथ खराब भएको चिकित्सकको ठहर पछि उनी साताको एकपटक भद्रपुरको एक हस्पिटलमा डाइलासिस गराउन थालेका छन् । केही महिना अघिसम्म बिर्तामोडमा रहेको आफ्नो पसलमा निरन्तर काम गरिरहेका उनी एकाएक मिर्गौला खराब भएपछि थलिएका हुन् ।
‘डाक्टरले मिर्गौला नफेरी हुँदैन भनेको छ’ उनको उपचार सहयोगार्थ रकम संकलन गर्न स्थानीयले गठन गरेको सहयोग समितिका संयोजक रमेश खतिवडा भन्छन् ‘अहिले देश विदेशबाट उहाँको उपचारका लागि सहयोग जुटाउने क्रम जारी रहेको छ ।’
मेचीनगर नगरपालिका आसपासमा मात्रै अहिले ३/४ जनाको उपचारका लागि सहयोग जुटाउन स्थानीय र आफन्तले अभियान चलाइरहेका छन् । दुवै मिर्गौला खराब भएका र जीवन मरणको दोसाँधमा रहेका चारआलीस्थित लिटल एन्जल्स स्कूलका कम्युटर शिक्षक शिवकुमार कुँवर पनि अहिले डायलासिस गराइरहेका छन् ।
भन्छन् ‘१२ दिनमा एकपटक डाइलासिस गर्नुपर्छ ।’ डाक्टरले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि रकम जम्मा गर्न भनेपछि कुँवरको उपचार सहयोगका लागि समिति गठन गरी आर्थिक संकलन गरिएको छ ।
दमकका टेकबहादुर बस्नेतको उपचारमा सहयोग गर्न आर्थिक संकलन गर्ने उद्देश्यले गायक तथा संगीतकार अर्जुन खरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि कम्तीमा १२ लाख रुपैयाँ जुटाउन चिकित्सकले भनेपछि आर्थिक सहयोग संकलन थालिएको जानकारी दिए ।
यसैगरी, पृथ्वीनगरका ३६ वर्षीय हरिशचन्द्र राजवंशीको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ६ महिना अघिमात्रै समिति गठन गरेर सहयोग संकलन थालिएको थियो । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, आवश्यक आर्थिक सहयोग संकलन भई उपचार नहँँदै उनले मृत्युवरण गर्नुपर्यो ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनले बेलैमा रोग थाहा पाएर पनि उपचार गर्न सकेका थिएनन् । हरिशचन्द्र बचाउ समितिका संयोजक हुकुमलाल गणेश भन्छन् ‘उनकोजस्तै नियति अरुले व्यहोर्नु नपरोस् ।’
कनकाईका राधेश्याम साहजस्ता कम उमेरका धेरै युवा मिर्गाैला रोगको शिकार बनेका छन् । मिर्गौलाको उपचार राज्यका तर्फबाट सित्तैमा गरिदिने र डायलासिस सुबिधा देशैभर निःशुल्क गरिदिने हो भने गरीब नेपालीले न अकालमा मृत्युवरण गर्नु पर्ने थियो न त मिर्गौलाको उपचार गर्दागर्दै आर्थिक बिचल्ली व्यहोर्नु पर्ने थियो ।
डायलासिस गर्न महिनामा २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुने र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने बताइएको छ । ‘हुने खानेहरुले त अचल जायजेथा बेचेर भए पनि उपचार खर्च गर्लान्’ मिर्गौला रोगी गणेश राईका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने अभियानमा लागेका खुदुनाबारीका श्याम तामाङ भन्छन् ‘गरीब परिवारले त दुनियाँका अघि हात पसार्नु बाहेक कुनै विकल्प हुँदैन ।’
मिर्गौला रोग र व्यवहारबारे चिकित्सकका कुरा :
मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरका मेडिकल सुपरिटेन्डण्ट डा. पिताम्बर ठाकुर आहार र बिहारमा नियमित ध्यान दिएका मिर्गौला रोगबाट बच्न सकिने सुझाब दिन्छन् । नियमित मर्निङ वाक र ब्यायाम गर्ने, दुखाई कम गर्ने (पेनकिलर) औषधिहरु जथाभावी नखाने, ब्लडप्रेसर र डायबिटीज नियमित जाँच गरेर नियन्त्रणमा राख्ने तथा दैनिक ३–४ लिटर पानी पिउने गरेमा मिर्गौला बिग्रिन नपाउने उनको सुझाब छ ।
मिर्गौला फेलियर हुने मुख्य कारण ब्लडप्रेसर र डायबिटिज भएको बताउँदै डा. ठाकुरले थपे, ‘नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगराउने नेपाली बानीले गर्दा मिर्गौला पूरै खराब नभएसम्म अधिकांशले रोगबारे थाहै पाउँदैनन् ।’
पिसाबको इन्फेक्सन भएमा, स्टोन भएर पनि थाहा नभएमा र दुखाई कम गर्ने औषधि लामो समयसम्म खाएमा मिर्गौला खराब हुने उनले जानकारी दिए ।
ब्लडमा युरिया बढेमा मानिसलाई मिर्गौला रोग लागेको थाहा हुन्छ । मिर्गौला रोग लागेको बिरामीको अनुहार, खुट्टा र शरीर सुन्निने, पिसाब कम लाग्ने, थकावट लागिरहने, झाडापखाला र वाकवाकी लाग्नेसमेत लक्षण देखिने डा. ठाकुरले बताए । जनचेतनाको कमीले गर्दा अचेल मिर्गौला रोग बढिरहेको र मानिसहरुको खानपान र आहार बिहार अब्यवस्थित हुँदै गएको उनको भनाई छ ।
‘किड्नी रोगले शरीरको सबै अंगमा असर गर्छ’ ठाकुरले भने ‘शरीरको कुनै पनि अंगमा समस्या आए समयमा नै उपचार गरे मिर्गौला रोगलाई निको पार्न सकिन्छ ।’